IMIPHEZULU YEETAFILE ZEGRANITE EMNYAMA (IMIBALA KUNYE NEZITAYILE) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Imiphezulu yeetafile zeGranite emnyama (Imibala kunye neZitayile)
Imiphezulu yeetafile zeGranite emnyama (Imibala kunye neZitayile)
Wamkelekile kwigalari yethu yemiphezulu yeetafile zegranite ezimnyama. Ukufumana ubuhle bendalo kunye neempawu ezomeleleyo, igranite emnyama iyathandwa ngenxa ye-aesthetics yayo ebukhali nenesibindi. Ihlala isetyenziswa njengezinto zokubala zekhitshini zale mihla nezangoku, igranite emnyama lutyalo-mali olunobulumko kunye nokhetho olusebenzayo kuye nabani na ofuna ukongeza ubucukubhede kumakhaya abo. Apha ngezantsi uyakufumana ezona ntlobo zidumileyo zeetheyitile ezimnyama kunye nokufumana izimvo zokuthelekisa igranite emnyama kunye neekhabhathi kunye ne-backsplash. Ngolwazi olongezelelweyo malunga imiphezulu yeetafile lenyengane Ndwendwela iphepha lethu lokugqibela.
Yintoni Black Granite? I-granite emnyama luhlobo lwerwala olunokuba sisiseko sedatha, i-basalt okanye i-gabbro. Yinto yokwakha ethandwayo esetyenziselwa zombini ngaphakathi nangaphandle kwezicelo ezinemibala eqala kumnyama ococekileyo onemigca emincinci okanye emnyama ondibaniso lwemibala yesibini emhlophe, ngwevu, naluhlaza, mdaka, luhlaza okanye golide. Uhlobo lwayo oluqhelekileyo yi-Absolute Black granite kunye ne-Black Pearl granite. Ukomelela kunye nokuqina kwegranite emnyama kuyenza ukuba ibe lukhetho oludumileyo lwezinto zokubala zekhitshi.
Iinkonzo kunye neengozi ze-Black Granite Countertops
Ukukhetha izixhobo zokubala eziMnyama eziMnyama ukuze utshatise iikhabhathi
Ukukhetha i-Backsplash yeBlack Granite
Iingcamango zokubuyela emva kwi-Black Granite Countertops
Iikhabhathi eziMhlophe ngeGranite emnyama
Iikhabhathi eziMnyama eziNziweyo eziPhezulu zokuPhela kweGranite
I-Honed Black Granite vs i-Granite emnyama eKhazimlisiweyo
I-Granite emnyama emnyama
Iindidi ezidumileyo zeBlack Granite
Eyona nto i-Black Granite
ICambrian Black Granite
I-Black Marinace Granite
Umnyama we-Uba Tuba Granite
IVolcano emnyama Granite
Kukho inani izibonelelo yokusebenzisa imiphezulu yeetafile yegranite emnyama:
Inenkangeleko eyahlukileyo kunye nomtsalane wobuhle obumangalisayo. I-granite emnyama ihlala iza kwiipateni ezahlukeneyo ezizezinye zazo. Umahluko weekristali zesilivere ze-mica kunye nezinye izimbiwa kwisiseko esimnyama samatye zifana neenkwenkwezi eziqaqambileyo esibhakabhakeni sasebusuku.
Yenza umxholo wobunzulu kunye nobukhulu ngokusilela kombala. I-granite emnyama ilungele ukudala umahluko kunye nokwaphula i-monotony yemibala eyahlukeneyo ekhitshini.
Inceda ukugxininisa imibala esetyenziswe kwisithuba. Itafile yegranite emnyama ivelisa imibala yezinto ezisingqongileyo ekhitshini.
Yongeza ubukho obumangalisayo ekhitshini. Itafile yegranite emnyama inegalelo kumandla anomdla kunye nawodwa.
Vusa ubuhle obuhle, obumangalisayo kunye nesibindi.
I-granite emnyama ikwahluka ngokubhekisele kuyilo njengoko inokusetyenziswa njengendawo yokubeka imithambo kuzo zombini iisetingi zale mihla nezesiko zasekhitshini.
Inika uluhlu olubanzi lokukhetha olunokusetyenziselwa uyilo njengoko lufumaneka kwiipatheni ezahlukeneyo. Iindidi ezahlukeneyo zegranite emnyama zilungele nawuphi na umbala wekhabhathi yekhitshi.
Ufihla amabala kunye nokuchitheka. Iimaski ezimnyama zokubala zenziwe ngobuso zichithe ulwelo kunye nokutya ngokungafaniyo nemibala ekhanyayo. Igranite ekhanyayo ikhombisa indawo kunye nokuqaqamba okungakumbi. Kuba ijiye ngakumbi, kunqabile ukuba ibambe amabala kunye nolwelo.
Ifuna ukucocwa kancinci kune-beige okanye imiphezulu yeetafile zegranite emhlophe . Ngokwemvelo igranite ekhanyayo ifuna ukucocwa rhoqo ngokuthe rhoqo xa kuthelekiswa negranite emnyama.
Xa itywiniwe ngokufanelekileyo, imiphezulu yeetafile zegranite ezimnyama zinokuhlala amashumi eminyaka.
Nazi ezinye bendlela ukusebenzisa imiphezulu yeetafile zegranite emnyama:
Ukuqheleka kumanqaku. Nangona igranite enombala omnyama ingazifihla amabala kunye nokuchitheka, ayikufihli ukuprintwa kweminwe.
I-granite emnyama ibiza kakhulu. Imiphezulu yeetafile zegranite ezimnyama zinokuba nexabiso elincinci xa kuthelekiswa neminye imibala yegranite.
I-granite emnyama inokwenza ikhitshi lakho libonakale limnyama, ngakumbi xa lidityaniswe nekhabhathi emnyama
Ukugcina imiphezulu yeetafile Black Granite
Ukugcina imiphezulu yeetafile zegranite emnyama kuthatha umzamo omncinci. Ifuna inkqubo efanayo yokucoceka efuna eminye imibala yegranite. Gcina isitafile sakho segranite yangasemva sicocekile kunye nokusetyenziswa kwesisombululo samanzi kunye nesepha kwaye ugcine ubuhle bayo bendalo ngokutywinwa kwamaxesha ngamaxesha.
Nasi isikhokelo esilula ekukhetheni umbala ofanelekileyo wekhabhathi wecwecwe lakho elimnyama legranite. Siza kuthetha ngeentlobo ezithandwayo zegranite emnyama kunye nemibala ehambelana nekhabhathi.
Umnyama ngokupheleleyo -I-Absolute Black granite kulula ukuyidibanisa ngenxa yokuzola kwayo, icocekile kwaye ijongeka ngokufanayo. I-granite emnyama emnyama ihambelana kakuhle nekhabhathi emhlophe emhlophe kunye nefuthe elahlukileyo. Ukuba ukhetha ukuyidibanisa nekhabhathi enombala omnyama njengombala omnyama okanye ongwevu, qiniseka ukuba ulungelelanisa isikimu sakho sombala ngombala okhanyayo. Kwikhabhathi yeplanga, iikhabhathi zeCherry zisebenza kakuhle kolu hlobo lwegranite kuba iyancoma umbala wayo. Khawukhumbule le ngcebiso ephambili ekuhambiseni umbala, ukuba usebenzisa umthunzi omnyama kwikhabhinethi yakho kunye neetafile zokubala zisebenzisa umbala okhanyayo kwizinto zakho zaphansi.
ICosmic emnyama-I-Granite emnyama yeCosmic yeyona ilungileyo kubanini bamakhaya abafuna ukhetho olunomdla ngakumbi, olonwabisayo nolwanamhlanje. Inokudityaniswa nekhabhathi emhlophe, emhlophe okanye emhlophe eyenziwe ngophondo lwendlovu njengoko ipateni yayo yokuqaqambisa igxininisiwe kwimvelaphi yokukhanya. Inokudityaniswa kunye neekhabhathi ezimnyama zeCherry kwisitetimenti esinesibindi. Imigca yayo emhlophe iyi-neutralizer egqibeleleyo yeempawu ezimnyama ezikhoyo kuyilo lwekhitshi.
Pearl emnyama -I-Black Pearl lenyengane inikezela ngenkangeleko engaphelelwa lixesha kunye neyesiko. Ukuba ujonge i-vibe yanamhlanje, bhangqa kunye neekhabhathi ezimhlophe ngokwahlulahlula njengoko zenza into engacacanga yokulawula kwindawo. Kwindlela yokuyila yodidi oluthe kratya, iikhabhathi ze-Oak ziya kuyinika iklasi ecekeceke kwaye ibukeke.
Ihlathi elimnyama Igranite yeHlathi eliMnyama yenye yeendlela zokubala zabanini bamakhaya abaxhomekeke kwimidlalo yokudlala ngakumbi ekhitshini labo. Ngenxa yokubonakala kwayo okuqhelekileyo, ilungile kwiikhikhini zangoku. Yidibanise kunye neekhabhathi ezimnyama kwisitetimenti esinesibindi kunye nesothusayo okanye ukuba ulungisa inkangeleko yeklasikhi, khetha iikhabhathi ezimhlophe. Umthi weCherry lukhetho olukhuselekileyo kolu hlobo lweetheyitile emnyama emnyama.
Impala emnyama -Ithiyinti yetheyitile emnyama yeImpala inokudityaniswa kunye neekhabhathi ezimhlophe zokuziva zanamhlanje kunye nokuthamba. Ngelixa zidityaniswe nekhabhathi enombala omnyama njengeCherry, ikhupha ubuhle obungaphelelwa lixesha. Inokudibaniswa nekhabhathi ye-Oak yelizwe elinobuhle.
ICambrian Mnyama -Ukugqibezela okucocekileyo kweCambrian Black granite kuyinika imbonakalo egudileyo. Inokudityaniswa nekhabhathi emhlophe ye-antique yokujonga i-rustic. Xa isetyenziswe njengendawo yokubeka iikhabhathi enombala omnyama, ibonisa ubuhle obuhambelanayo kunye nolungelelwaniso lokujonga jikelele kwekhitshi lakho. Ikhabhathi yamaplanga eyenziwe ngomthi nayo inokusetyenziselwa le ndawo ityhidiweyo emnyama yokubhanqa njengoko ukubhangqwa kwayo kunika ukukhanya nokukhanya komoya kwigumbi.
Ingcebiso ephambili: Khawukhumbule nje lo mgaqo osisiseko ngokuhambelana kombala, ukuba usebenzisa umthunzi omnyama kwikhabhinethi yakho kunye neetafile zokubala zisebenzisa umbala okhanyayo kwizinto zakho zokuthambisa ukuze uphephe ukwenza indawo yakho ibe mnyama kakhulu okanye inzima.
Kukho amathuba angapheliyo okuyila xa kufikwa ekukhetheni izinto zokubuyela umva ezifanelekileyo kwitafile emnyama yegranite. Ukusetyenziswa kwekhawuntari emnyama kusebenza kuso nasiphi na isitayile sasekhitshini ngenxa yobuhle bayo obukhethekileyo nobuchanekileyo obenza ukuba ilungele inani lezinto zokubuyela umva.
Xa ukhetha i-backsplash material ye-black granite countertop, unokwenza udibaniso ngokusebenzisa into enombala okhanyayo okanye ukuba ukhetha umphumo omangalisayo ekhitshini lakho, ungaya ngombala omnyama. Mhlawumbi indlela yokuyila eqhelekileyo kwezi zimbini zeendlela zangoku zasekhitshini zezangaphambili, njengoko uninzi lwabanini bamakhaya kule mihla luthanda ukukhetha izinto ezimhlophe zokubuyela umva kwiitafile zazo ezinemibala emnyama.
Marble I-marble emhlophe ibonelela ngendlela encinci kodwa yeklasi njengesixhobo sokubuyela umva kwimiphezulu yeetafile zegranite ezimnyama. Ilungile ukongeza umahluko ocekeceke kwinkangeleko yendawo. Xa zidityanisiwe kunye, i-marble backsplashes emhlophe ivusa imvakalelo yokuhlaziya kuyo nayiphi na indawo ngelixa i-countertop emnyama isaphula i-monotony yendawo. Ukuba ukhetho lwesimbo sodidi lwakudala, sebenzisa amacwecwe emarmore emhlophe njengoko ukufana komphezulu kusesikweni. Ngelixa ujonge kuseto lwangoku kunye nolwanamhlanje, khetha ukuba isiko lakho lemarble lisikwe njengetayile yesikwere kwaye uyibeke kwipateni yokudibanisa.
Iithayile zangaphantsi -Iitayile zangaphantsi zincinci iithayile zecaramic ezimhlophe ezixandekileyo zihlala zii-intshi ezi-3 ngo-6 intshi ngobukhulu. Yinto efanelekileyo yokubuyela umva kweekhitshi zesitayile sanamhlanje ezinikezela ngococeko olucocekileyo. Xa ubhangqiwe ngetafile emnyama emnyama ehloniphekileyo, ikhabethe elimhlophe kunye nomgangatho wokhuni, yenza ingxelo elula ukudibanisa ngokudibeneyo kunye nolungiselelo lwangoku.
Iithayile zikaMoses Iithayile zikaMoses yiglasi, i-porcelain okanye iithayile zeceramic ezihlala zii-intshi ezimbini okanye iisentimitha ezi-5 ngokobukhulu. Inokuba sisikwere okanye uxande kwaye ihlala ifumaneka ngokulula kwiivenkile zokuphucula ikhaya. Iithayile zikaMoses zizibini ezifanelekileyo zokubala imiphezulu yeetafile zegranite ngenxa yomahluko wemibala engenayo. Xa ukhetha umbala ofanelekileyo weetayile ze-mosaic backsplash, sebenzisa imibala yeeflecks, streaks okanye imithambo ekhoyo kumphezulu wecwecwe lakho elimnyama lenyengane. Le mibala inokusebenza njengesikhokelo sokwenza iskimu esihambelanayo sokuhambelana nekhitshi lakho.
Khumbula ukuphepha ukubhangqa i-mosaic tile backsplashes kunye negreyite emnyama emnyama yokwenza ikhitshi lakho lingoyiki kwaye liphazamise. Umzekelo wesicelo esifanelekileyo sokumataniswa kukuthelekisa iithayile zemibala epholileyo ngombala kunye nekhabhathi yokukhanya ye-Absolute Black Granite kunye nekhabhathi yesitayile se-beige shaker- isiphumo likhitshi langoku elihlaziyiweyo oya kuthi ngokuqinisekileyo ulithande.
Iithayile zeCeramic -Iithayile zeCeramic ziyaziwa njengezinto zokubuyela umva kuba ziyafumaneka kumbala obanzi wemibala kunye noluhlu olubanzi lweepateni. Uhlobo lwangoku loyilo olunje ngeetayile zemizobo kwiiprinta ezahlukeneyo okanye iipateni zejiyometri. Ukuba ukhetha ukwenza isitetimenti ngesixhobo sakho sokubuyela umva endaweni yesithethi sakho esimnyama segranite, khetha iithayile zeceramic ezinoshicilelo olwahlukileyo njengoko zibamba ingqalelo. Iitafile zegranite ezimnyama eziHloniphekileyo, ukukhanya kwe-ceramic tile ekhanyayo kunye nekhabhathi enemibala ekhanyayo yindawo efanelekileyo yokulinganisa ikhitshi yesitayile sangoku.
Isilayidi - Isilayiti luhlobo lwelitye lendalo elihlala liluhlaza, luhlaza, ngwevu okanye umhlwa ngombala. Xa ubhangqiwe ngecwecwe elimnyama lokubala, longeza ubume kunye nokufudumala kwikhitshi elinemixholo yendabuko. I-slate backsplash kunye ne-black granite countertop yokubhanqa isebenza kakuhle xa idibene neekhabhinethi. Yenza imeko yasekhaya kunye neyokumema ngelixa inika ugxininiso kwinkangeleko yendalo kunye noburhabaxa bezinto ezahlukeneyo ekhitshini.
Umkhwa I-Travertine luhlobo lwelitye elihlala limhlophe okanye linombala okhanyayo kwaye liqhelekile ngaphakathi nakwizicelo zokwakha zangaphakathi. Xa isetyenziswe njengesixhobo sokubuyela umva kwikhabhathi enombala okhanyayo, i-travertine ivumela i-countertop emnyama ukuba iphume ivumele ukuba ibe sisitshixo sendawo. Ilungele iikhitshi ezinembonakalo yakudala.
Iglasi -Iglasi ithathwa njengeyinto yokubuyela umva ekhitshini. Ukufuna umgudu omncinci wokuyigcina, lukhetho olutsha lokukhetha izinto ezingasemva. Ingubo yemizobo okanye iglasi epeyintwe ngasemva enemibala ekhanyayo inikezela ngokungafaniyo ngokuthe gca neetafile ezimnyama zegranite ngelixa usongeza i-vibe yanamhlanje ekhitshini lakho. Ukuba kwicala lokulinga ngakumbi kunye ne-eclectic, imiphezulu yeetafile zegranite ezimnyama zinokudityaniswa ngeglasi enemibala eqaqambileyo enje ngombala obomvu ukwenza ukubukeka kwe-retro okanye okwangoku.
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo -I-backsplash yentsimbi engenasici isebenza ngokufanelekileyo kwiikhitshi zale mihla njengoko ingenamthungo kwaye icwangcisiwe. Kukulungele ukwenza umahluko kubume bokuhombisa kwaye longezo lwesitayile nakweyiphi na ikhitshi enezinto zokubala ezinombala omnyama wegranite. Ngaphandle kokubonakala kwayo kwe-aesthetics, i-stainless steel ikwakhwela ukumelana kwaye kulula ukuyigcina. Xa ubhangqiwe ngee-countertops ezimnyama zegranite, unokukhetha ukugcina i-slab ikhuni ngaphezu kwesiqhelo kweso siqhelo esithandwayo.
Ekhitshini kukho imiphezulu yeetafile zegranite ezimnyama ezineentlobo ezimbini ze-backsplash, itayile emhlophe engaphantsi kwendlela phakathi kweekhabhathi zokhilimu kunye nentsimbi yentsimbi engenantsimbi engaphezulu kwestofu ngaphezulu.
isipho somtshakazi kwintombazana ehloniphekileyo
Igranite emnyama nomhlophe inikezela ngokuguquguquka kuyilo njengoko inokudibanisa kakuhle nakweyiphi na indawo ekubhekiswa kuyo ekhitshini nokuba ingaba inekhabhathi ekhanyayo okanye emnyama. Idala umahluko obonakalayo kwaye isebenza njengenye yeendawo ekugxilwe kuzo ekhaya. Imizekelo yayo yiCosmic Black granite kunye ne-Black Forest lenyengane.
Kuboniswe ngentla likhitshi lanamhlanje elinendawo yokuphanda ephezulu yeHlabathi eMnyama yegranite kunye ne-satin emnyama ecocekileyo egqityiweyo egqitywe ngaphezulu kweekhabhathi. Ukulula kokuyilwa okupheleleyo kwekhitshi kuvumela ipatheni ebengezelayo yegranite ukuba ibonakale.
Njengoko umntu anokuqaphela, akukho sidingo sempahla yongeziweyo kwisithuba njengoko ubuhle bodwa becwecwe lokubala lenyani elimnyama unokuzithetha. Ipateni yayo eyahlukileyo yokutyabeka yaphula ubumbano bezinto ezigqityiweyo ekhitshini. Igreyite yeHlathi eliMnyama ikwanabela eludongeni olungasebenziyo njengesixhobo sokubuyela umva kuphela kodwa njengesandi sendawo.
Le khitshi yelizwe inezinto zokubala ezimnyama nezimhlophe kwisiqithi esijikelezileyo esiqhathaniswe neekhabhathi ezimhlophe, izitulo zebha, isinki yendlu yefama kunye ne-backsplash. Ikhitshi elimhlophe elinegranite emnyama linokusebenzela iindlela ezahlukeneyo zoyilo kwaye libonelele ngokuchaseneyo nomdla obonakalayo.
Umahluko yenye yezinto eziphambili ekudaleni uyilo lwekhitshi. Nokuba inokuba ngokwemiba yoburhabaxa okanye imibala, umahluko unika ubungakanani kwisithuba.
Eyona ndlela ilula yokwenza ikhitshi lakho pop kukuba ukhethe umahluko ngokwekhabhathi yakho kunye nombala wecompetop. Olunye unyango oluqhelekileyo kukubhangqa iikhabhathi ezinemibala ekhanyayo kunye nesiphatho esimnyama esimnyama okanye ngokuchaseneyo.
Imiphezulu yeetafile zegranite ezimnyama ezifaniswe nekhabhathi emhlophe, cream okanye ngendlovu sisicelo esidala salo mgaqo. Isetyenziswa ngokuxhaphakileyo kwiikhitshi zesitayela zangoku kunye nezangoku. Ukongeza imhlophe kwiitafile ezimnyama kunokwenza ikhitshi lakho libukeke liqaqambile ngokwaphula ubumnyama okanye ubunzima bokusebenzisa imibala emnyama kakhulu ngaphakathi kwesikimu sombala wakho wasekhitshini Ikwadala ibhalansi phakathi kokukhanya nobumnyama.
Iphalethi yemibala ye-monochrome ikwayindlela yoyilo ye-iconic engaphumiyo kwifashoni. Ikwavumela ukuba ungenise ngokulula iipopu zemibala egxininisayo kwitayile yeetoni ezimbini.
Umfanekiso ongasentla ubonakalisa umzekelo wecwecwe lokumisa igranite emnyama kunye nekhabhathi emhlophe yekhitshi. Ubume obumenyezelayo begranite emnyama ecoliweyo lulongezo olunomdla kuyo yonke imbonakalo emhlophe yekhitshi. Ipeyintiwe ngomthi omnyama we-cherry, yenza ukuba indawo ibe mnandi ngakumbi, imeme ngelixa kukhutshwa indawo eqaqambileyo nomoya.
Iikhabhathi eziMnyama eziNziweyo eziPhezulu zePlanethi
Ngelixa usebenzisa iikhabhathi ezimnyama ezinemiphezulu yeetafile zegranite ezimnyama zinokubhenela kwabanye, ayisiyonto iqhelekileyo kulwakhiwo lwamakhaya amatsha okanye kwiimodeli zekhitshi. Esona sizathu soku kukuba into emnyama ekhitshini emnyama inokuba nzima kancinci emehlweni kwaye imnyama kakhulu. Ikhitshi elingentla lithelekisa ukugqitywa kobumnyama nge-backsplash emhlophe kunye nomgangatho we-ceramic, kunye nokuphuculwa kukukhanya kokukhanya kwendalo, izibane zangaphantsi kwekhabhinethi, izibane ezigqityiweyo kunye nesiphatho.
Amakhitshi athengisa amakhaya kwaye uninzi lwabanini bamakhaya bakhetha ukusebenzisa imibala engathathi hlangothi ekholisa ukuthengisa eyona ilungileyo xa bebeka ikhaya labo kwintengiso. Ukuba ufuna imiphezulu yeetafile emnyama kunye neekhabhathi ezimnyama zekhaya lakho, inye loo nto, nangona kunjalo uceba ukuthengisa kungekudala, okanye ukurenta ikhaya, ungafuna ukuqaphela imibala eyahlukileyo xa usebenzisa igranite emnyama.
I-Granite ifumaneka ngeendlela ezahlukeneyo kunye nokugqiba. Ngaphandle komsebenzi owenzayo, oku kugqiba ukongeza ubuhle nakweyiphi na indawo ngokwenza ubukhulu kunye nobunzulu.
Ukukhetha ukugqitywa kwegranite efanelekileyo kwi-countertop yakho akuyi kuchaphazela kuphela ukujonga nokuziva kwekhaya lakho, kodwa kuya kuthintela umbala welitye kunye nenqanaba lokugcinwa kwalo. Ukuthelekisa iintlobo eziqhelekileyo zokugqitywa kwegranite, akukho mpendulo ngqo malunga nokuba yeyiphi eyona ilungileyo kuba nganye inezinto ezilungileyo nezingalunganga. Isigqibo sokugqibela kunye nokukhetha kuxhomekeke kukhetho lomntu ngokobuqu kuyilo kunye nezinto ezijikelezileyo kunye nezinto esele zikho ekhaya. Oku kuya kukunika umbono wokuba kukuphela kokusebenza kuya kusebenza kakuhle kwi-countertop yakho yekhitshi yekhitshi.
Zintathu izinto ezigqityiweyo ezithandwayo zegranite ezikhoyo emarikeni, isiphelo esikhazimlisiweyo, isiphelo se-honed kunye nesiphelo se-leather. Ngaphandle kwezi, kukwakho nezinye iiyantlukwano ezinje ngesiphelo esivuthayo, isiphelo esinebrashi, isiphelo esidala kunye nesiphelo seTuscan. Ezi ntlobo zobume bomphezulu zichongiwe apho iphela inkqubo yokugqiba.
Enye yezinto ezigqityiweyo zokugqiba i-granite yi ekugqibeleni olukhazimlisiweyo . Kuthathelwa ingqalelo njengokugqibezela okugqwesileyo kwegranite, olu hlobo lokugqiba luphawulwa yimbonakalo yalo ecwebezelayo ethi ikhuphe ubuhle obupheleleyo belitye. Ikwonyusa izinto zendalo zelitye ezenza ukuba umbala wazo utyebe kwaye ubemnyama. Igranite ebengezelisiweyo inomphezulu ogudileyo kunye nokuqaqamba okuninzi, okucekethekileyo kwaye kunesipili esifana nesiphelo.
Ulondolozo olumkileyo, lenyengane olukhazimlisiweyo kulula ukuyicoca kuba ibuyisa ukungcola kunye nolwelo. Inkqubo eqhubekayo yokufumana umphezulu wayo okhazimlayo itywina amatye e-pores ayikhusele ngokuchasene namabala amaninzi. Kananjalo ayigcini iibhaktheriya ezigcina ukulungiswa kokutya zicocekile kwaye iphantse ayinakuchukunyiswa nakuphi na ukunxiba kweekhemikhali kunye nezinye izinto. Esi sisizathu esinye sokuba kutheni kukhetho oluqhelekileyo kwiitafile zekhitshi.
I-countertop ye-granite ephosiweyo ihlala isetyenziselwa iikhitshi zemveli kunye nezakudala. Indawo yayo ebonakalayo ibonakalisa ubuqaqawuli obungenasiphelo kunye nesibheno esidala kulo naliphi na igumbi. Ukubonakala kwayo okuqaqambileyo kwenza ukuba igumbi libonakale liqaqambile. I-granite emnyama epholileyo yindawo efanelekileyo yokubeka iikhitshi ezineekhabhathi ezimhlophe ezimhlophe. Zifunwa kakhulu ngokuzisa umda kwimeko emnandi yesiko.
Olunye uhlobo lokugqitywa kwegranite yi- ukugqiba ukugqiba . Olu hlobo lokugqiba lubonakaliswa yimatte, umphezulu we-satin. Inendawo engaguquguqukiyo, ethe tyaba, egudileyo kodwa inemibala ebonakalayo ekhanyayo kunokugqitywa okupolishiwe. Ngokuqhelekileyo kufezekiswa ngokumisa inkqubo yokuhlambalaza nokucoca phambi kokuba ilitye libonakalise kwaye likhazimule. Iyafumaneka ngeendlela ezahlukeneyo ezizezi kugqitywa iVelvet, ukugqiba kweSatin, ukugqibezela iDayimani nokuGqibela koMatshini.
Nangona yahlukile kwaye intle ngendlela yayo, i-granite ebekekileyo inezinto ezininzi ezingalunganga. Enye yeziphene zayo kukuba ukunqongophala kwe-luster kunye nokukhanya kuyazifihla iimpawu eziyinyani zegranite. Ukuhlonipha kungenza ukuba umbala wendalo wegranite uphele. Ixabiso elichanekileyo, libiza kakhulu kunegranite ecoliweyo ngenxa yokufumaneka kwayo. Ngokumalunga nolondolozo, kufuneka iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde ibe yinto epholileyo kuba inomdla kwaye iyakwazi ukuxutywa kwamanzi kunye namabala.
Xa ukutya okunombala onamandla okanye ulwelo kuchitheke phezu kwecwecwe elibekiweyo legranite, kunokubangela umbala kwaye kubangele amabala amnyama. Izinto ezineasidi ezinjengeejusi, iziselo ezinxilisayo kunye nesoda zinokude zibeke ilitye kumphezulu welitye kungoko kungcono ukuthatha unonophelo olongezelelekileyo xa ujongana nolu hlobo lweplititi yegranite yokugqiba. Kwakhona, imiphezulu yeetafile yegranite ehloniphekileyo ayikufihli ukuprintwa kweminwe, igrisi kunye ne-smudges kakuhle oko kufuna ukosulwa rhoqo kunye nolondolozo lwemihla ngemihla.
Olu hlobo lokugqiba lufanelekile kwiikhitshi zangoku kunye nezala maxesha kuba ziqhelekile kodwa zintle kakhulu. Ubume bayo obungacacanga buzisa umahluko ophakathi kwiimpawu ezahlukeneyo ezikhoyo kuyilo lwekhitshi.
Imiphezulu yeetafile zegranite ezimnyama ezimnyama zilungele ukudala i-vibe yanamhlanje ekhitshini. Enye yeentlobo zegranite ezimnyama ezijongeka zintle kwisiphelo se-honed yi-Absolute Black granite njengoko umbala wayo olula wejethi umbala omnyama ume kolu hlobo lokugqiba.
Ukugqitywa okugqityiweyo lolunye lweentlobo ezintsha zokugqiba ezihamba kwimarike. Ikwabizwa ngokuba yiAntiqued Granite, olu hlobo lokugqiba lunobume bendalo ngakumbi kwaye lubonisa umbala wokuqala welitye. Kuba igranite engaxutywanga ingakhange ipolishwe, ibonisa uburhabaxa bendalo belitye kwaye ikhupha ubuhle bayo bendalo. Iphawuleka nges sheen ethambileyo engacwebezeli ngakumbi kunokubengezela okuqaqambileyo okubonakala kokugqibela kokugqitywa. Ngamanye amagama, inokhanyiso oluncinci kodwa ubuninzi bobume.
Uhlobo lwesikhumba lokugqitywa kwegranite luqala ngomgangatho welitye elihonjisiweyo emva koko kufezekiswa ngokuhambisa iibrashi ezinamakhonkco edayimani zinqumle umphezulu welitye ukwenza ubume. Ubume besiphumo buyahluka ngokwakhiwa kwegranite njengamatye anombala ofanayo kunye nombala ongaguquguqukiyo uya kuba neziphumo ezingaphantsi kakhulu xa kuthelekiswa negranite enokwahluka ngakumbi ekubunjweni kwayo. Ukuba i-honing ithambekele ekwenzeni imibala yegranite iphele, ulusu kwelinye icala luyigcina umbala wayo wendalo. Ngokwesiqhelo amatye amnyama afana negranite emnyama ayakulungela ngakumbi ukwenziwa kwesikhumba.
Kukho inani lezibonelelo ekusebenziseni olu hlobo lokugqiba kwi-countertop yakho ye-granite. Omnye umzekelo kukuba ufihla iminwe, amabala amanzi kunye ne-smudges kakuhle. Kodwa icala elisezantsi kukuba ineendawo zokuntywila apho ukungcola nothuli kunokufihla khona. Ayisiyonto inqabileyo ekumelaneni nebala kunesiphelo esikhazimlisiweyo kodwa kulula ukuyigcina kunesiphelo se honed.
Uyilo ngobulumko, ukugqitywa kokuxubeka kongeza ubume obunobuqhetseba obenza ukuba bube bobulungele iRustic, iLizwe kunye nekhitshi leantiki. Ukubonakalisa imbonakalo yegreyidi yesikhumba, yongeza isibheno kunye nobutyebi kwizithuba. Yenza ingxelo enomdla kuyo nayiphi na ikhitshi kuba yahlukile kokugqitywa kwesiqhelo okuqhelekileyo okufumaneka kwizindlu ezininzi.
Iimpawu: Luhlobo lwegranite phantse emnyama ngokugqibeleleyo ngombala. Ngombala ongaguquguqukiyo kunye nokuthungwa kuyo yonke indawo, i-Absolute Black Granite inesiseko esimnyama esimnyama esineenkozo ezibonakalayo ezibonakalayo ezenza ukuba ibe lukhetho oluthandwayo kwiikhikhini zangoku. Ifumaneka kugqatso olucekeceke, ikwabizwa ngokuba yiJet Black Granite, Jet Blacky Granite, Nero Absolute, India Premium Black Granite, iPrimiyum Black Granite okanye iTelephone Black Granite.
Ixabiso: $ 18 ukuya kwi-22 ngeenyawo zenyawo nganye (3cm ubukhulu)
Ilizwe lemveli : Indiya
Umahluko wePateni: Phantsi
Iimpawu: I-granite emnyama emnyama luhlobo lwelitye le-gabbro -ilitye elinomlilo elimnyama neliphakathi ukuya erhabaxa. Iphawulwa ngombala omnyama onegolide encinci kunye nemhlophe emhlophe eneeminerals. Olu lukhetho oludumileyo lweekhikhini zangoku njengoko luzalisekisa imibala yeekhabhathi zomthi. Yenza ingxelo emangazayo njengoko ibengezela phantsi kweemeko ezifanelekileyo zokukhanyisa.
Yaziwa nangokuthi yi-Star Galaxy Granite, Gold Star Galaxy Granite, Black Galaxi Granite, Black Star Granite, Galaxi Black Granite, Galaxy Black Stone Granite, Galaxy Gold Granite, Nero Galaxy Granite, Nero Star Galaxi Granite, Nero Star Galaxy Granite, Black Galaxy Granite .
Ixabiso: $ 40 ngonyawo wesikwere (3 cm ubukhulu)
I-granite emnyama ye-galaxy isebenza kakuhle ngokuphula i-monotony yekhitshi emhlophe yonke. Xa isetyenziswa njengendawo yokuphambela ekhitshini, yongeza umahluko kwikhabhathi ekhanyayo ngelixa inika ubunzulu kwinkangeleko ngokubanzi yendawo. Njengoko kubonisiwe apha ngasentla, inokusetyenziselwa iindlela zasekhitshini zangoku.
Iimpawu: Ikwabizwa ngokuba yiSilver Pearl Granite okanye iBlack Labrador Granite, olu hlobo lwegranite lunesiseko esimnyama esimnyama esimnyama esimnyama kunye nemicu emnyama, yegolide, emdaka kunye nesilivere mica. Xa zivelisiwe ekukhanyeni, iiminerali zinefuthe elimenyezelayo elibonisa isilivere kunye namachaphaza angwevu okanye ngamanye amaxesha umbala omnyama oluhlaza okwesibhakabhaka okanye umbala oluhlaza. I-Black Pearl Granite inokudityaniswa kunye neekhabhathi ezimhlophe kwindawo yangoku okanye yanamhlanje yekhitshi.
Ixabiso: $ 16 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu), $ 12 ngonyawo wesikwere (2cm ubukhulu)
Iimpawu: Ikwabizwa ngokuba yiCosmic Night Stone Granite, iCosmic Black Granite, iBlack Cosmic Stone Granite okanye iGranito Preto Cosmico Stone Granite. Olu hlobo lwegranite lunombala omnyama wesiseko kunye nomzekelo ojikelezayo wemithambo emhlophe ethambileyo kunye neeminerali zesilivere. Inembonakalo eyahlukileyo efana nomnyele. Lukhetho oludumileyo lweekhitshi zesitayile sanamhlanje kwaye longeza olwahlukileyo kwiikhabhathi ezimhlophe zekhitshi.
Ixabiso: Iidola ezingama-40 ukuya kwezingama-45 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu)
Ilizwe lemveli : Brazil
Iimpawu: I-Impala Black Granite luhlobo lwelitye le-gabbro eliqhele ukubonakala ngesilivere ngenxa yokudityaniswa kwezimbiwa ezimnyama nezingwevu kwipateni engqinelanayo. Ikwabizwa ngokuba yi-Eagle Black Granite okanye i-African Nero Impala Granite, ngumdlalo ogqibeleleyo wazo zombini imibala nekhanyayo iikhabhathi zasekhitshini.
I-Back Impala Granite ikwanazo neethoni ezimbini ezizezi, iRusterburg D. kunye neRustenburg M. IRustenburg D. inombala omnyama ofanayo kunye nomnyama ngenxa yedipozithi egxile kakhulu efumaneka kumphezulu wayo. Olunye uhlobo lwamanqanaba lwenza umbala ophakathi ukuya kumbala omnyama ngombala.
Ixabiso: $ 40 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu)
Ilizwe lemveli : Mzantsi Afrika
Iimpawu: Uhlobo lwegranite oluye lwatshayela imithambo emhlophe emhlophe, yeendlovu kunye neyegrey ngasemva okumnyama. Inenkangeleko ebonakalayo eyenza ukuba ibe bhetyebhetye ngokubhekisele kwisicelo sekhabethe nakweyiphi na ikhitshi. Ikwabizwa ngokuba yiNero Foresto okanye i-Oscuro Mist.
Ixabiso: I-22 ukuya kwi-26 yeedola ngeenyawo zenyawo (3cm ubukhulu)
Ilizwe lemveli : Indiya neBrazil
Iimpawu: Olu hlobo lwegranite lunombala omnyama osisiseko kunye neeminerali ezingwevu kunye namaxesha athile okukhanya okungwevu okukhanyayo kunye neeminerali ezintle ezimhlophe. Ikwabizwa ngokuba yiRoyal Black Granite kwaye eyona ndawo idumileyo yeyokugqibela. Ingasetyenziselwa njengendawo yokubeka ikhitshi enee khabhathi ezimhlophe nezimhlophe.
Ixabiso: $ 43 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu)
Ilizwe lemveli : Khanada
Iimpawu: Ikwabizwa ngokuba yiMnyama Granite Granite okanye iGolden Marinace Granite, iAquarium Granite, iNero Marinace Granite okanye iMorgan Morgan Granite. Olu hlobo lwegranite lunepateni engafaniyo eyahlukileyo yamatye amdaka kunye nobhedu okanye amatye omlambo abekwe ngasemva okumnyama nokungwevu. Inkangeleko yayo iphantse yafana nendlela yelitye elihonjisiweyo - amakhulu amatye amancinci amile ngeendlela ezahlukeneyo, ubukhulu kunye nemibala eyahlukeneyo. Njengempahla yekhawuntari, iyahambelana nokukhanya ukuya kumbala omnyama wekhitshi ekhitshini kwaye yenza indawo ekugxilwe kuyo kuyo nayiphi na indawo. Bona Okuninzi I-countertop ye-beige granite izimvo apha.
Ixabiso: $ 60 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu)
Umahluko wePateni: Phakathi
Ungayibhala njani intetho elungileyo yomntu
Iimpawu: I-Angola Black Granite inombala omnyama grey ukuya kumbala omnyama.
Amanye amagama oshishino ngala: Black Angola Granite, Angolan Black Stone Granite, Lapis Black Granite, Labrador d'Angola Granite, Labrador Black Stone Granite, Angola Labrador Granite, Black Labradorita Granite, Labradorita de Angola Stone Granite, African Black Stone Granite, Nero Angola Granite, Negro Angola Stone Granite, Negro de Angola Stone Granite, Nero Angola Granite, Preto Angola Granite okanye Gramangola Black Granite,
Ixabiso: $ 45 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu)
Ilizwe lemveli : Angola
Iimpawu: Olu hlobo lwegranite luphezulu luhlaza ngombala. Inepateni efihlakeleyo emhlophe, eluhlaza kunye negolide ngokuchasene nemvelaphi emnyama engwevu nomnyama. Inomxholo ococekileyo ococekileyo. I-Black Uba Tuba Granite inenkangeleko engaguquguqukiyo kuyo yonke indawo kwaye ibonakalisa kakhulu phantsi kweemeko ezifanelekileyo zokukhanyisa. Isebenza kakuhle njenge-cntertop yamakhitshi aneekhabhathi ezinemibala ekhanyayo.
Ikwabizwa ngokuba yiVerde Uba Tuba Granite, Green Ubatuba Granite, Ubatuba Granite, Verde Ubatuba Light Granite, Verde Bahia Granite, okanye Bahia Green Granite.
Ixabiso: I $ 23 ukuya kwi-33 yeedola ngeenyawo zenyawo (3cm ubukhulu)
Iimpawu: I-Bengal Black Granite ineenkozo ezimhlophe ezingwevu nezisasazwa ngokufanelekileyo kwimvelaphi emnyama. Iqhele ukusetyenziselwa ukongeza umahluko kwiikhabhathi ezimhlophe kwiikhitshi ezinamhla nezangoku.
Ixabiso: $ 30 ngonyawo wesikwere (3cm ubukhulu)
Iimpawu: Ikwabizwa ngokuba yiNero Volcano Granite, olu luhlobo lwegranite enemibala emininzi enepateni engaqhelekanga. Inembonakalo eyahlukileyo ephawuleka ngokudityaniswa kwemigca emdaka, imhlophe emhlophe kunye namafu amnyama, isilivere kunye neeminerali eziluhlaza ngokuchasene nemvelaphi engwevu nomnyama. Ukubonakala kwayo okumangalisayo kwenza ukuba kukhethwe i-countertop efanelekileyo yokongeza idrama kunye nobunzulu kuseto lwekhitshi olunemibala ekhanyayo.
Ilizwe lemveli : Indiya / iBrazil
Umahluko wePateni: Phezulu
Ndwendwela igalari yethu ye imibala lenyengane ngezimvo ezingakumbi zeprojekthi yakho yokulungisa ikhitshi elandelayo.
yimalini imitya yomtshato
ubudala beminyaka abantu abatshatayo
ndingakuthandi kanjani lyrics
iilokhwe zokunxiba kumtshato wangokuhlwa
Ngaba ndifanele nditshintshe igama lam lokugqibela